Zvese izvi ini ndichakupa iwe: zano rizere nezvakavanzika, kusarangwa uye makaro | Zvazvino Zvinyorwa
Zvese izvi ndichakupa ibhuku rechishanu nemunyori weBasque Dolores Redondo, rakaburitswa mu2016. Iri bhuku rematsotsi rakaiswa muGalician Ribeira Sacra, iro zano rizere nezvakavanzika, kusarangwa uye makaro. Nebasa iri munyori wekunyora akakunda iyo 65th Edition yeiyo Planeta Prize, mushure mekupa iro gwaro rine zita Zuva reThebes, uye pasi pemanyepo Jim Hawkins.
Pamusoro pechipo chakakosha chakataurwa, Redondo akave wekutanga munyori wechiSpanish kuwana iyo Bancarella Mubairo (2018), yeiyo Italian vhezheni yebhuku iri. Gore rimwe chete gare gare, saiti yazvino Business Insider akasarudza bhuku iri semumiriri wedunhu reLugo, mune chinyorwa chakanzi: "Rwendo rwekunyora kuburikidza neSpain yeZuva reMabhuku", yakanyorwa naAna Zarzalejos.
1 Pfupiso yeZvese izvi ini ndichakupa (2016)
2 Kuongorora kweZvose izvi ndichakupa (2016)
2.2 Madingindira akasiyana
2.3 Mamiriro enzvimbo eGalician Ribeira Sacra
2.4.1 Elvaro Muñiz de Dávila
3.1 Kuyaruka uye zvidzidzo zvehunyanzvi
3.2 Basa semubiki
3.3.1 Novels naDolores Redondo
Pfupiso ye Zvese izvi ndichakupa (2016)
Zvese izvi ndinokupa...
Mamwe mangwanani, Manuel akanyora magumo ebhuku rake rekupedzisira: Zuva reThebes; pakarepo gogodza pasuo rako, uye pakuvhura inosangana magadhi maviri akapfeka yunifomu. Vamiririri vanobva vamubvunza kana ari hama yaIlvaro Muñiz de Dávila, uye mushure mekusimbisa kuti aive murume wake, vanomuzivisa nezvechiitiko chisina kunaka: vlvaro akaita tsaona yemumugwagwa kuGalicia kwaakafira nhamo.
Yakanyanya kubatwa uye panguva imwechete kufadzwa, Manuel anoenda kuRibeira Sacra. Kusvika, inosimbisa kufa kwerudo rwehupenyu hwake, Uye kunyangwe achinetsekana nezvakaitika, nyaya yacho yanga yatovharwa. Achiri ikoko, achatanga kuwana ruzivo rwehupenyu hwemurume wake mushakabvu.
Akarambwa navatezvara vake uye akanyudzwa mukusuwa, Manuel ave kuda kudzoka paanobatwa naNogueira, muchengeti wehurumende. Izvi zvinomutsa kufungidzira kwake maererano nenyaya iyi, izvo zvinomutsa maari kusahadzika kutsva nezvekufa kwemumwe wake uye nemhuri yake isinganzwisisike. Kufungidzira uye kufungidzira kweaimbove mukuru, pamwe nekuda kuziva kwaManuel uye hasha, zvichavatungamira kuti vabvunze nezve tsaona inonzi "tsaona".
Kuongorora kuchasanganiswa nemupristi Lucas, akatungamira mariro uye aive shamwari yehucheche yehudiki. Zvishoma nezvishoma, zvitsva uye zvinoshamisira nezve Álvaro - uyo akararama hupenyu huviri - zvichabuda., iyo inogona kutungamirira kurufu. Vatatu ava vachakonzera kusagadzikana kukuru mumhuri inokudzwa, iyo ichaedza kuvatadzisa kusvika pachokwadi; asi kuedza kwako kuchave pasina.
Analysis of Zvese izvi ndichakupa (2016)
Ndiyo nyaya yematsotsi danho rake rekutanga ndiMadrid, asi anobva aenda kuChantada, mudunhu reLugo kuGalicia. Iri bhuku rine zvishoma kupfuura Mapeji 600, yakakamurwa kuva 47 zvitsauko ndokuudzwa mumunhu wechitatu nemunyori anoziva. Zano ndizvo yakanyatsorongeka uye inoratidzwa pane inodonha, iyo inochengetedza hunyengeri kubva pakutanga, kusvika kumagumo anoshamisa.
Iyo rondedzero inotaura nezvenyaya dzinoverengeka, kusanganisira kuferefetwa kwetsaona, iyo inonyanya kuitiswa ne protagonist nevatsigiri vake vaviri. Semagumo, zvakavanzika zvakawanda, kunyepa uye zviito zvisiri pamutemo zvemhuri inokudzwa zvichafumurwa uye inoremekedzwa nevanhu. Iyo inoratidzawo yakawanda yeGalician tsika uye tsika, zvese zvevanhu uye zvechitendero.
Mamiriro enzvimbo eGalician Ribeira Sacra
Mune ino novel, munyori akasarudza Galicia senzvimbo yekuvandudza kwevatambi. Iyo nyaya inoratidzwa mune pazo de los marquises de Santo Tomé, inzvimbo yekunyepedzera asi yakafanana zvikuru nenzvimbo dzedunhu reLugo. Iyo nharaunda ine hushamwari uye inotonhora nekuda kwemamiriro ekunze, asi ine inoshamisa uye yakanaka nharaunda, iyo Redondo inotsanangura zvakadzama mubhuku.
Elvaro Muñiz de Dávila
Iye muzvinabhizinesi, anofa pakutanga kwechirongwa; ndiye achave mukobvu mukuru munyaya. Pakutanga, nekuda kwekufa kwake kusinganzwisisike; uye chechipiri, cheupenyu hwake hwakavanzika. Sezvo runyorwa rwunowanda, hama dzake - avo vari chikamu chevaGalician aristocracy - uye zvikonzero zvakamumanikidza kurarama hupenyu hwakasiyana hwakasiyana panguva imwe chete zvichazivikanwa.
Iye munyori, akasimuka mukurumbira nekuda kwenyaya yake yekutanga uye akaroora Álvaro. Manuel achapfuura nematanho akati wandei, kubva pakuramba kutsamwa mushure mekuona zvakavanzika zvemurume wake. Chokwadi chako chinozochinja zvakanyanya nekuda kwekufa kwake; nemhuri nyowani, nhaka hombe uye enigmas dzakawanda dzinowedzera nharaunda ine hukasha.
Iye ndibaba veKaturike uyezve shamwari yepedyo yaÁlvaro, kuvimbika kwehukama hwechokwadi kunozoratidzwa mazviri. Ruka ichapa rutsigiro rusingaperi kuna Manuel uye zvichamuyeuchidza kuti aiziva reallvaro chaiye. Pamusoro pezvo, nehunhu uhwu munyori anoratidza mamiriro anotyisa anokuvadza kereke uye asingazombobuda pachena.
Iye mukuru pamudyandigere weSpanish Civil Guard, murume ane tsika yemhuri, ane tsika dzakasimba. Hunhu uhu ichave inotsigira kwazvo Manuel mumibvunzo yekufa kwaÁlvaro. Nekuda kwechiitiko ichi iwe unozochinja, uye uchave unonyanya kushivirira munhu.
Maria Dolores Redondo Meira Iye akazvarwa muDonostia - San Sebastián, neMugovera Kukadzi 1, 1969. Ndiye dangwe remuchato weGalician; baba vake, mufambisi wechikepe; naamai vake, amai vemba. Aive nehucheche hwakaratidzwa nekuchema uye kurwadziwa, nekuti pazera re5 akarasikirwa nehanzvadzi yake. Munguva idzodzo dzakasuruvara munyori akareurura kuti akapotera pakuverenga kuti arege kuita duel.
Kuyaruka uye zvidzidzo zvehunyanzvi
Kubva achiri mudiki aifarira zvinyorwa; ku Makore gumi nemana akanyora nyaya dzake dzekutanga uye akazotora chikamu mumakwikwi akasiyana mundima iyi. Zvakafanana nebasa rake semunyori, akatanga zvidzidzo zvake muMutemo kuYunivhesiti yeDeusto, basa raakasarudza kuchinjira kune rimwe raakadaidzira: kubika; saka akadzidza uye akapedza kudzidza mukudzoreredza gastronomic.
Aingova nemakore makumi maviri nemana ekuberekwa, aitova shefu mune rake bhizinesi, nzvimbo diki iri muSan Sebastián. Mushure memakore maviri ekushanda nesimba uye kudzidza kwakawanda, akafunga kuzvivhara nekuda kwekushaikwa kwemari, nekuti zvinhu hazvina kufamba sezvaitarisirwa. Gare gare, akaenderera nebasa rake semubiki mune mamwe maresitorendi, atove akasununguka uye asina zvakawanda zvekuita kana kunetseka.
Muna 2009, munyori weSan Sebastian akaburitsa bhuku rake rekutanga Ropafadzo dzemutumwa. Makore mana gare gare, rake basa rakatora 180 degree kutendeuka, paakapa mutambo Muchengeti asingaoneki (2013), yaakatanga nayo Baztán trilogy. Iyi saga yakakurumidza kuve chiitiko chekunyora, iine zvimwe 700.000 makopi akatengeswa uye yakadudzirwa mumitauro inodarika makumi matatu kutenderera pasirese.
Mushure meiyi inoshamisa budiriro, iyo literata yakabudiswa Zvese izvi zvichaita Ndichapa (2016), novel yaakatambira iyo Planet mubairo chegore rimwe chetero. Muna 2019, yakaratidza Chiso chekuchamhembe chemoyo, prequel kune iyo Baztán trilogy mune iyo kutanga kwebasa remutambi mukuru wesaga, Amaia Salazar, inoratidzwa kune vaverengi.
Novels naDolores Redondo
Iyo isingaonekwe muchengeti (2013)
Kupa kuDutu (2014)
Zvese izvi ini ndichakupa (2016)
Iyo North Chiso cheMoyo (2019)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Zvese izvi ndichakupa